यौन क्षमता बढाइदिने छेपारो, जुन ६४ लाख रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ – Enayanepal.com
यौन क्षमता बढाइदिने छेपारो, जुन ६४ लाख रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ
घरका भित्ताहरुमा वा यता उता टाँसिइरहने छेपारोको मूल्य लाखौँ सम्म पर्छ भन्ने कुरा सायदै तपाइँ कल्पना गर्न सक्नुहोला । तर चीनमा एउटा विशेष खालको छेपारोको मूल्य सुन तथा हिरा भन्दा पनि कम छैन ।
यो दुर्लभ छेपारोको नाम गिको हो । यो छेपारोले विशेष आवाज निकाल्दछ । टक के भने जस्तो आवाज निकाल्ने भएकाले यसलाई टक के छेपारो पनि भनिन्छ । चिनिया बजारमा यो छेपारोको मूल्य ६४ लाख रुपैयाँ जति पर्दछ । जाबो एउटा छेपारोको मूल्य यति धेरै पर्नुको खास कारण यो छेपारोमा भएको विशेष गुण हो ।
यो छेपारोको मासु औषधि बनाउनमा प्रयोग हुन्छ । दक्षिण पूर्व एसियामा मधुमेह तथा एड्स र क्यान्सर जस्ता रोगको परम्परागत औषधि बनाउनमा प्रयोग हुन्छ । यति मात्र होइन यौन क्षमता बढाउने औषधि बनाउन पनि यो छेपारोको प्रयोग गरिन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय ब्लाक मार्केटमा समेत यो छेपारोको उच्च माग छ । लाखौँ रुपैयाँमा यसको तस्करी हुने गरेको छ । यो जातको छेपारो दक्षिण पूर्व एसिया, इण्डोनेसिया, भारत, फिलिपिन्स तथा नेपालमा पनि पाइन्छ । लगातारको वन विनाशका कारण यो छेपारो अहिले संकटमा परेको छ ।
प्रहरी सई शर्माले गरे एरिचोकमा होहल्ला, सूचना दिन मानेनन एसपी पन्त र इन्सपेक्टर रायमाझीले
दैलेखकाे आठबीसमा मास्क आतंक, ६ नम्बर वडाकार्यालयले बाँडयो प्रति घर दुइ मास्क त्यो पनि पुराना कपडाका
कुकुरका कारण अविनासको गुप्ताङ्ग बिनास
पतिको कमाइले स्टाफ नर्स पढेर जागिर पाएपछि ‘हैसियत नमिल्ने’ भन्दै सम्बन्धविच्छेद !
सु्र्खेत भेरीगंगा नपाका कार्यकारी पौडेलकोे मनोमानी, नगरभरि माछाका भुरा खरिद गर्न १२ हजार !
साैचालयमाथि छाउगाेठ (फाेटाे)
संविधान दिवसमा तास खेल्न, पिकनिक जान, बियर खान, गलफ्रेन्ड-ब्वाईफ्रेन्ड भेट्न विदा होइन: संचारमन्त्री
रेलवेमा जुम्ल्याहा दिदीबहिनी